एक वर्षभित्र देशैभर फोरजी सेवा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं। फोरजी विस्तारका लागि टेन्डर आह्वान गरेको एक वर्षपछि नेपाल टेलिकमले सम्झौता गरेको छ। आइतबार टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच कम्पनीले कोर नेटवर्क विस्तारमा सबैभन्दा कम रकम कबुल गरेको चिनियाँ कम्पनी जेडटीई र दुईवटा रेडियो एक्सेस् नेटवर्कका लागि चाइना कम्युनिकेसन सर्भिसेज इन्टरनेशनल(सीसीएसआई) हङ्कङ्सँग सम्झौता गरेको हो।
दुवै कम्पनीसँगको सम्झौता अनुसार एक वर्षभित्रै देशभर चौथो पुस्ताको (फोरजी) सेवा विस्तार हुनेछ। सम्झौतामा टेलिकमका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र दुवै कम्पनीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपालमै पहिलोपटक २०७३ साल पुस १७ गतेबाट फोरजी सेवा सुरु भएको हो। टेलिकमको यो सेवा अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यका र पोखरामा मात्रै सिमित छ।
बोलपत्र अनुसार अप्टिकल कोरका लागि जेडटीईले एक करोड ५३ लाख डलर, सिङ्गापुरको मभिनिरले दुई करोड १० लाख डलर र चिनियाँ कम्पनी हुवावेले तीन करोड ८० लाख अमेरिकी डलर रकम कबुल गरेका थिए।
त्यस्तै दुई चरणमा छुट्याइएको र्यान १ र २ मा जेडटीई र सीसीएसआईले मात्र सहभागिता जनाएका थिए । त्यसमध्ये र्यान १ मा जेडटीईले नौ करोड ९८ लाख डलर र सीसीएसआईले आठ करोड ४७ लाख डलर कबुल गरेका थिए। र्यान २ मा भने जेडटीईले ८ करोड ८९ लाख र सीसीएसआईले ८ करोड २२ लाख डलर रकम कबुल गरेको थियो।
त्यतिबेला ३४ महिनाभित्र देशभर फोरजी सेवा विस्तार गर्नुपर्ने शर्त टेलिकमले राखेको थियो।टेलिकमले फोरजीका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितताको आशंकामा यसको अनुसन्धान थालेको थियो। दुई महिनाअघि आयोगले फोरजी विस्तारसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई गर्न निर्देशन दिएपछि रोकिएको प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो।
मन्त्रालयले फोरजी ठेक्काको सम्झौता गर्नुअघि सहभागी कम्पनीलाई एक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । सोही शर्तमा सहभागी कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएपछि टेलिकमले आइतबार अन्तिम सम्झौता गरेको हो। सम्झौता मितिदेखि एक वर्ष गणना हुने गरी सम्बन्धित् कम्पनीले विस्तारको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
काठमाडौँ र बुटवलमा मुख्य कोर रहने यस परियोजना सातै प्रदेशमा विस्तार हुनेछ। अहिलेको विस्तारबाट कम्पनीले ६५ लाख थप फोरजी ग्राहक बढाउन सक्नेछ। करिब १९ अर्ब लगानी रहने यो परियोजनालाई कम्पनीले टूजी, थ्रीजी र फोरजी ओभरले हुने गरी सञ्चालन गर्नेछ। यसो हुँदा ग्राहकले आफ्नो छनोट अनुसार जुनसुकै पुस्ताको इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्नेछन्।
यो परियोजना अन्तर्गत देशभर कुल ६ हजार ७३७वटा बीटीएस स्टेसन थप हुने कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार फोरजी विस्तारको काम सम्पन्न भइसकेपछि यसलाई सफट्वेयरकै प्रयोगमार्फत एड्भान्स फोरजी अर्थात ४.५ जी सम्म अपगे्रड गर्न सकिनेछ । त्यस्तै फ्रिक्वेन्सी प्राप्त विद्यमान ब्यान्डमै फाइभजीको अनुमति प्राप्त भए अहिलेकै टावरमार्फत फाइभजीमा अपगे्रड गर्न सकिने पनि उनले जानकारी दिए।
सम्झौता अनुसार फाइभजीको अनुमति प्राप्त गरेपछि सम्झौता गरेका कम्पनीले देशका विभिन्न चार ठाउँमा निःशुल्क रूपमा फाइभजी परीक्षण समेत गर्नेछन्।
विश्वभर भिडियो कन्टेन्टका लागि प्रयोग गरिने फोरजीमा प्रयोगकर्ताले दूत गतिमा डेटा र भ्वाइस प्रयोग गर्न सक्नेछन् । फोरजीमा ‘हाइ डेफिनेसन’ अर्थात एचडी गुणस्तरको भ्वाइस हुने कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै घरभित्रको प्रयोगका लागि ‘स्मल सेल विथ वाईफाई’ सुविधा उपयोग गरी इन्टरनेट चलाउन सकिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १८ सय ब्यान्डमा फोरजी सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। गाेरखापत्र दैनिक